Fahaverezana maharary - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Fatiantoka maharary
Rehefa teo am-panamboarana ny akanjoko aho dia hitako fa nanjavona ny akanjoko tiako indrindra ary tsy nihantona tao amin'ny efitranoko toy ny mahazatra. Nitady eny rehetra eny aho fa tsy nahita. Azo inoana fa navelako tany amin'ny hotely izy io tamin'ny dia iray hafa. Noho izany dia nofonosina ilay tampony mifanitsy ary nahita zavatra hafa azoko atao miaraka aminy.
Kivy aho rehefa very ny zavatra tiako, indrindra rehefa misy vidiny. Mampihetsi-po ny very zavatra, toy ny manadino ny toerana nametrahanao zavatra, toy ny fanalahidy na taratasy manan-danja. Ratsy kokoa ny fandrobana. Ny toe-javatra toy izany dia mahatonga anao hahatsiaro ho tsy afa-manoatra, tsy afaka mifehy ny fiainanao intsony. Matetika, tsy misy azontsika atao afa-tsy ny manaiky ny fahaverezana ary mandroso.
Ny fatiantoka dia ampahany amin'ny fiainana aleontsika tsy misy, fa isika rehetra dia miaina izany. Ny fiatrehana sy ny fanekena ny fatiantoka dia lesona tsy maintsy ianarantsika na ho ela na ho haingana ary matetika. Saingy na dia efa antitra aza sy manana traikefa eo amin'ny fiainana ary ny fahalalana fa mora ny manolo ny zavatra, dia mbola mahasorena ny very. Ny fatiantoka sasany, toy ny fahaverezan'ny akanjo ba na ny lakile, dia mora ekena noho ny fatiantoka lehibe kokoa, toy ny fahaverezan'ny fahaizana ara-batana na ny olon-tiana. Farany, misy ny famoizana ny aintsika. Ahoana no fitazomana ny fomba fijery marina? Nampitandrina antsika i Jesosy mba tsy hametraka ny fontsika sy ny fanantenantsika amin’ny harena mety ho simba, dia ny harena mety ho very, mangalatra, na hodorana. Ny fiainantsika dia tsy avy amin’izay ananantsika. Tsy refesina amin’ny haben’ny kaontiny any amin’ny banky ny sandantsika ary tsy tratra amin’ny fanangonam-bokatra ny joie de vivre. Ny fatiantoka maharary kokoa dia tsy mora ny manazava na manadino. Ny vatana efa antitra, ny fahaiza-manao sy ny saina mandositra, ny fahafatesan'ny namana sy ny fianakaviana - ahoana no hiatrehana izany?
Mihelina ny fiainantsika ary misy farany. “Jereo ny fanirin’ny lilia: tsy miasa izy, na mamoly koa; Fa lazaiko aminareo fa Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'izy ireo. Koa raha ny ahitra eny an-tsaha anio no ampitafin'Andriamanitra, ary hatsipy ao am-patana rahampitso, tsy mainka va ianareo, ry kely finoana! Koa ianareo koa, aza manontany izay hohanina na izay hosotroina” (Lioka 12,27-29). Tahaka ny voninkazo mamony amin'ny maraina isika ary malazo amin'ny hariva.
Na dia tsy mampahery aza izany, dia mampahery ny tenin’i Jesosy hoe: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; Izay mino Ahy dia ho velona na dia maty aza » (Jo 11,25 NLB). Amin'ny alalan'ny fiainany dia afaka havotana sy hiova ho amin'ny fiainana vaovao isika rehetra. Ao amin’ny tonon’ny hiran’ny filazantsara tranainy iray dia milaza hoe: Satria velona Jesosy, dia ho velona koa aho rahampitso.
Satria velona izy, dia manjavona ny fatiantoka ankehitriny. Ny ranomaso rehetra, ny kiaka rehetra, ny nofy ratsy rehetra, ny tahotra rehetra ary ny fanaintainana rehetra dia hofafana ary hosoloina joie de vivre sy fitiavana avy amin’ny Ray.
Ny fanantenantsika dia ao amin'i Jesosy - amin'ny ràny manadio, ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fitiavany rehetra. Namoy ny ainy ho antsika izy ary nilaza fa raha very ny aintsika isika dia ho hitantsika ao aminy izany. Very ny zava-drehetra eo amin'ny lafin'izao tontolo izao any an-danitra, fa ao amin'i Jesosy no hita ny zava-drehetra ary rehefa tonga izany andro mahafaly izany dia tsy hisy ho very intsony.